Gbanwee omume ndị ahịa na Badegeville | Blog MarTech
Fraịdee, June 22, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ikike ịgbanwe omume ndị ahịa nwere ike ịbụ akara dị nsọ nke ndị na-ere ahịa e-ahịa. Ihe ịma aka na isoro ndị ahịa na gburugburu ebe obibi taa bụ iguzosi ike n'ihe ha na-agaghị akwụsị akwụsị mgbe ha chere ọtụtụ nhọrọ ihu. Iji dozie nke a, azụmaahịa ga-agbanwe usoro ha na-aga ma ọ bụ nye ihe ndị ahịa chọrọ n'otu ntabi anya. Nke a anaghị ekwe omume mgbe niile site na akụrụngwa taa. Egwuregwu bụ atụmatụ nke na-enyere ndị ahịa aka na mbọ ndị a.
Otu ụlọ ọrụ na-egwu egwuregwu nke dị na mpịakọta ugbu a bụ Badgeville. N'oge na-adịbeghị anya, Badgeville gafere ego ọzọ wee nweta ya Mgbakasị Wiki, na oru arụzi mmekọrịta. Badgeville na-enye ezigbo ngwaọrụ iji nye ihe nsogbu nye nsogbu ndị a.
Badgeville na-emetụta ndị ọrụ egwuregwu, ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-arụ ọrụ aha ọma yana nyochaa ụkpụrụ omume ma ọ bụ omume ma ọ bụ onye ọbịa webụsaịtị. Usoro siri ike nwere ike iji nyocha amụma iji zaghachi onye ọbịa ahụ dabere na ihe onye ọbịa ahụ lere anya dị mma ma ọ bụ na-atọ ụtọ. Na isi nke Badgeville smart gamification mmemme a bụ Behavior Platform nke na-agbaso omume ma na-etinye usoro ntinye aka egosipụtara iji meziwanye mmekọrịta onye ọrụ, soro ndị ahịa aka nke ọma ma melite nrụpụta ndị ọrụ.
Usoro omume a gụnyere nchịkọta nke ngwaọrụ bara uru.
Igwe Omume na-achọpụta na ụgwọ ọrụ omume dị elu bara uru.
Ntinye aka Mechanics emeziwanye ndị ọbịa site n'itinye nzaghachi oge iji nye egwuregwu mmekọrịta dịka ahụmịhe maka ọbịa.
Nchịkọta omume na-enye ụlọ ọrụ data na nghọta nke na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ ghọta otu ndi mmadu si etinye aka na ha.
Ngwaọrụ wijetị Studio & Onye Mmepụta bụ nchịkọta nke ndị nrụpụta siri ike nke na-enye ohere ka ụlọ ọrụ ahụ guzobe nghọta na amamịghe Njikọ Aka na ihu ha.
Iji zipụ egwuregwu n'obere ndị ahịa na ndị ọrụ, Badgeville na-enye usoro akparamagwa isii, nke bụ azịza ntụgharị nke na-agba ọsọ n'ọtụtụ akụrụngwa nke Behavior Platform.
The Isi Gamification kpuchie na-enye ohere ka ụlọ ọrụ ahụ jiri egwuregwu rụọ ọrụ na mkparịta ụka ndị nkịtị ma ọ bụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu.
The Ọkachamara ọkachamara nke obodo na-eme ka ikpo okwu obodo dịkwuo mma.
The Mpi Pyramid usoro na-agwa ụlọ ọrụ nke mmemme ndị ahịa na-arụ ọrụ kacha mma.
The Ntuziaka Nduzi Onwe na-enye ohere ka ụlọ ọrụ nwee ike itinye ndị agbamume maka ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ha itinye aka n'omume na-achọsi ike.
The Community Onye na-emekọ ihe ọnụ na - enyere aka iji teknụzụ na - ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya karịa site na usoro ịkwụ ụgwọ.
The Chalọ Ọrụ llema Aka kpuchie nwere ike bụrụ azịza maka ekpere ndị ọrụ ebere, n'ihi na ọ na-enye ohere ịmepụta asọmpi egwuregwu na ịkwụ ụgwọ iji mee ka mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mma na omume.
Badgeville na-enyekwa ngwaọrụ wijetị - nchịkọta nke wijetị akpachapụrụ anya na ahazi. Ngwaọrụ ndị a gụnyere ndị isi, ihe ngosipụta rụzuru, ọrụ saịtị oge, ọkwa ndị enyi, obere profaịlụ nke isi, ọkwa, na ndị ọzọ.